Isintu wakhela izindlu ukuze bazivikele amakhaza, imvula, ukushisa. Manje, zonke lezi zici isinyathelo ngqo zokwakha ezivela kuso. Ukuze isakhiwo wakhonza isikhathi esithile eside, yayidle ngokuqina futhi ukhululekile, isisekelo, izindonga nophahla lwendlu futhi kudingeka uvikelwe kubantu umswakama.
Hhayi kuphela CIS kodwa futhi eYurophu bazi "Technonikol" imikhiqizo corporation. I-mastic lokhu brand izinga hhayi kuphela kuyahlangabezana nezindinganiso European izinga kodwa ngokuvamile idlula analogue angaphandle. Izinkampani eziningi professional ukwakhiwa uncamela sebentisa tinhlobo letehlukene mathiriyeli lo brand ethile ngoba zinikeza izinga, imvelo futhi iqine.
Nokuvikela endlini nokusetshenziswa mastics bituminous "Technonikol" ngokuvamile eyenziwa abaluphahleka. Akubalulekile kangako, onjani impahla isetshenziswa njengesisekelo (ukhonkolo, metal, izinkuni), emva ukugeza "Technonikol" mastic kudala ifilimu eqinile, okuyinto ayikuvumeli umswakama ukubhubhisa kungenzeka impahla isizinda.
Ungangenisi amanzi of izisekelo
Indaba enhle okuyinto ngokulinganayo ngempumelelo njengoba endlini ngoba nokuvikela izindonga zewayini, ezindlini zangasese nasezincwadini nakubhavu, amachibi noma balcony, futhi enza umsebenzi wokulungisa ingaphandle esifakwe ophahleni lwendlu noma ukudalwa ungqimba okuvikela mastic "Technonikol-31".
It possesses okusezingeni eliphezulu umlilo ukusebenza, imvelo, is zahlanganiswa esitsheni elula futhi isilungele ukusetshenziswa. Ngokwesilinganiso, ungqimba enamathela bungaba yimitha elilodwa odongeni square ibusa amakhilogremu mayelana nengxenye kwe-mastic, futhi bome ke ngemuva kwamahora amahlanu. Ngemva kwalokho, ungqimba yesibili sisetshenziswa. ukusetshenziswa Ubude lapho mastic kudivayisi ukubekwa uphawu kungekho amakhilogremu angaphezu kuka-3.5 per imitha square (kuncike ukushuba ungqimba). Yokugcina omiswe nesikhathi ungangenisi amanzi - ngesonto.
Uma umsebenzi wenziwa egumbini elingaphansi komhlaba, kungcono ukusebenzisa izinto kusukela ezihogelwayo "Technonikol". I-mastic esekelwe samanzi singenalo ukuhogela, ngakho umuntu osebenza nayo egumbini avaliwe, hhayi ukuze bafake ubuthi izingozi ukuhwamuka kuphela. Futhi, akabashiyi nephunga ezingemnandi ezindaweni zokuhlala, uma isebenza nokuvikela kuvulandi noma ubhavu.
Lokhu-mastic usimende ongenza oyedwa, ngisho noma engenazo okwakha okhokhelwayo.
Iinsetjenziswa ukufulela mastic
Ake Corporation "Technonikol" mastic ingasetshenziswa ukuze Monolithic kudivayisi bituminous ukufulela, njengoba base ingcina wempahla kuwebhu noma Tile esithambile. Ukusetshenziswa wokufulela mastics - 3.8-5.7 kg / m2. Iinsetjenziswa ophahleni Monolithic mastic kudinga mayelana 6 kg imitha ngalinye, futhi nokuvikela uphahla ukusondelana ethambile base - 4.5 kuphela kg per imitha square.
zifudumele of izisekelo
Uma wenza ukwahlukanisa kanye yangaphandle ungangenisi amanzi izisekelo isixazululo esisemqoka ngeke unamathisele ukuthanda "Technonikol-27", okuzokwenza ngokuphepha ukubophela polystyrene amabhodi cishe wonke evele (ukhonkolo, metal, roll ukwahlukanisa). ukungaguquguquki kwalo pasty kwenza kube elula ukusebenzisa mastic amashidi, futhi ukugeleza impahla ngalesi encane kakhulu - cishe amakhilogremu ngamunye imitha square surface. Positioning yezimanga emapheshana mastic (4 cm ububanzi) noma izindawo azungezwe nesitsha maphakathi (izingcezu 10). Yenza isinqumo esifanele: mastic "Technonikol" Liyoba yini ikhambi ngempumelelo kakhulu futhi ukonga!
Hot iphuma ukuqinisa. Isisindo imitha of okuhlinza induku ngayinye
Amathayili Metlahskoy: izinzuzo, izici, isitayela
Ukufakwa of air conditioning. Imigomo yokusetshenziswa of imishini HVAC
Aluminium nethusi izintambo - indlela ukuxhuma? Terminals yokuxhuma izintambo
Kuyini romanticism ezincwadini: definition. Romanticism kwekhulu le-19 ezincwadini: izici abameleli